EJamani 30 ooVimba-Funda ukuRhweba
tag: Jamani 30
IJamani 30 (DE30EUR) Imizabalazo engezantsi kwenqanaba le-13350, inokujongana nokwaliwa
IJamani i-30 kukunyuka okuphezulu kodwa ijongene nokuchasana kwinqanaba le-13350. Kwakunokwenzeka ukuba ifikelele ekuphelelweni ngamandla njengoko ijongene nokwaliwa. Ngomhla we-10 kuNovemba, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya ukuphindiselwa kwe-Fibonacci eyi-88.6% Oku kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.1129 kwaye mhlawumbi sibuyiselwe umva.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sihamba ecaleni. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokwaliwa kwinqanaba le-13450. Nge-11 kaDisemba, isalathiso saye sawela kwinqanaba le-13040 saphinda saqala ngaphezulu. Ukunyuka okwangoku kunokwenzeka ukuba uphinde uphinde uphinde uxhathise kwinqanaba le-13450.
I-DE30EUR-4- Itshathi yeYure
I-DE30EUR inyukele phezulu. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokwaliwa kwinqanaba lokumelana ne-13350. Ukuqhawulwa kokuchasana kuya kwenza ukuba ingqekembe iphinde iqhubeke kwakhona.